Ukuhambisa - I-Ocean-Components.com
I-Ocean-Components.com inikezela ngeendlela ezahlukeneyo zokuhambisa: sinokukunceda ucwangcise ukuhanjiswa kwepakeji ngeFedex, i-DHL, i-UPS, i-TNT, i-EMS, okanye enye indlela oyithandayo, ungayikhetha eyakho inkonzo yokuhambisa izinto xa ubambisene nonikezo oluthile inkampani.Sikwamkela indlela yokuhambisa njengoko umthengi eceliwe.
Imali yohambisa ngenqanawe:
Ukuhambisa iindleko kuxhomekeke kubungakanani, ubunzima, indawo ekuya kufakwa kuyo iphakheji. Sinobudlelwane bexesha elide kwishishini kunye ne-FedEx kunye ne-DHL. Siza kuzama konke okusemandleni ukukunikezela ngexabiso elifanelekileyo lokubonisa. Kukhuseleko lwakho lokupakisha, siya kuthenga i-inshurensi yepasele enkulu.
Ukuhanjiswa kwamahhala kwehlabathi kwii-odolo ezifanelekileyo kune-USD $ 1000.00 nge-DHL / FedEx. Ukuba inani lilonke elingaphantsi kwe-USD1000,00 iya kongeza iindleko zokuhambisa i-USD60-110.00 yi-DHL / FedEx esekwe kubungakanani / ubukhulu.
Umthwali udla ngokubonelela nge-akhawunti ye-intanethi ukulawula ukuthunyelwa kunye neempawu eziphambili kakhulu.
Sibambelela kuyo yonke imigaqo-nkqubo kunye nemithetho yokuthumela kwelinye ilizwe. Ezinye iimveliso zisenokuthintelwa yi-ITAR kwaye izithintelo zokuthumela ngaphandle zinokubangela ukulibaziseka kwexesha lokuhambisa.
UkuHanjiswa kweXesha kunye neNdawo eyaKhutshwa kuyo
Siza kucwangcisa ukuhanjiswa ngaphakathi kweentsuku ezingama-1-2 ukusuka kumhla wokufika kwezinto zonke kwindawo yethu yokugcina izinto.
a). Iintsuku zethu zomsebenzi ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu singabandakanyi uMgqibelo, iCawa kunye neeholide.
b). Ukuhanjiswa kwexesha kuxhomekeke kwindlela yokuHambisa kunye nokuHanjiswa kweeNdawo.
Imisebenzi, iirhafu kunye nezinye iifizi luxanduva lomamkeli, njengoko iintlawulo zethu zizihlawula kuphela imali yokuhambisa iphakheji. Ukuqikelela iindleko ezinokubakho, nceda uqhagamshelane ne-ofisi yesiko lakho.
Nantsi itafile yexesha lokuzonwabisa elivela kwigumbi lethu lokugcina ukuya kwindawo oya kuyo ireferensi.
I-DHL Iintsuku ezi-2-4 Iintsuku ezi-3-4 Iintsuku ezingama-3-5 Iintsuku ezi-3-6 Iintsuku ezingama-3-5 Iintsuku ezi-4-6
I-FedEx IP Iintsuku ezi-2-4 Iintsuku ezi-3-4 Iintsuku ezi-4-5 Iintsuku ezi-3-6 Iintsuku ezi-4-6 Iintsuku ezi-4-6
* amaxesha okuhambisa nawokuhambisa abalwa kwiintsuku zokusebenza ukusuka ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu. Kwimeko yeholide ezinkulu ezinjengeKrisimesi, nceda uvumele ixesha lokuhanjiswa okongezelelekileyo. Ngezo zihlandlo zikhethekileyo siya kukhumbuza ngokulibaziseka okunokwenzeka.
La mazwe alandelayo ESINGANAKUKHOTYELA kuwo, ngenxa yomgaqo-nkqubo: Afghanistan, kwiCentral African Republic, kwiRiphabhlikhi yaseCote d'ivoire, kwiDemocratic Republic of the Congo, kwiDemocratic Republic of Republic yaseKorea, kwi-Commonwealth yase-Eritrea, kwiRiphabhlikhi yaseLebhanon, IRiphabhlikhi yaseLiberia, iRiphabhlikhi yeDemokhrasi, iRiphabhlikhi yaseSudan.
Ngolwazi oluthe kratya malunga nokuhanjiswa, nceda unxibelelane nathi ku I-info@Ocean-Components.com